Mediam-bahoaka · Marsa, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Marsa, 2012
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Marsa, 2012
Iràka: Zaikabe Voalohany Niarahan'ireo Bilaogera Irakiana
Rising Voices 31 Marsa 2012
Ny zaikabe voalohan'ireo bilaogera Irakiana dia nanomboka ny 8-9 ny Febroary tao an-tanànan'i Sulaymaniyah. Ny Fampahalalam-baovao Sosialy Irakiana no nikarakara ity hetsika ity ary maherin'ny 70 ny bilaogera Irakiana manerana ny firenena no nanatrika. Nitondra fanantenana betsaka ity zaikabe ity ho an'ny firenena manana taham-pidirana aterineto ambany dia ambany sy ny mikasika ny fiarovana ny bilaogera.
Fifaninanana Lahatsary: “Everyday Digital Native” – Alefaso Ny Safidinao Dieny Izao
Ireo mpitsara ny "Everyday Digital Native video contest" izay nokarakarain'ny Centre for Internet & Society (CIS), India, ary ny HIVOS dia nisafidy lahatsary miisa 12 tamin'ny fihodinana faharoa. Azonao atao ny mijery ireo lahatsary tafakatra tamin'ny dingana famaranana ary mifidy ny iray izay tena ankafizinao hatramin'ny 31 Martsa 2012. Ny lahatsary miisa dimy be mpifidy indrindra ihany no azo lazaina ho mpandresy amin'ny 1 Aprily 2012